(Xog rasmi ah) Dowladda Soomaaliya oo kaalin ku laheyd kiiska sarkaalka ONLF Cabdixakiin Sh Muuse | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta (Xog rasmi ah) Dowladda Soomaaliya oo kaalin ku laheyd kiiska sarkaalka ONLF...
(Xog rasmi ah) Dowladda Soomaaliya oo kaalin ku laheyd kiiska sarkaalka ONLF Cabdixakiin Sh Muuse
Ilo xog-ogaal ah oo lagu kalsoon yahay oo Warbaahinta Ummadda Media, ay ka heshay madaxtooyadda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin sarkaal ka tirsan jabhadda ONLF oo dowladda Soomaaliya ay u gacan galisay dowladda Itoobiya.
Warkan oo aan ka helnay madaxtooyadda wuxuu tilmaamayaa in dowladda Federal-ka ee Soomaaliya ay dhex-dhexaadisay sarkaal sare oo ka tirsan ururka ONLF iyo Itoobiya, kaddib markii labada dhinac ay afgarad ku gaareen inay wada xajood galaan .
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabdixakiin Sheekh Muuse, ayaa wadahadal kula jiray dowladda Itoobiya in muddo ahba sida lagu xaqiijiyay ilo wareedka aynu helnay, iyadoo dowladda Soomaaliya doorka ay ka qaadatay uu ahaa oo kali ah door dhexdhexaadnimo, sida ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan Villa Soomaaliya.
Dhexdhexaadinta dowladda ay ka dhex waday labadaasi dhinac ayaa ugu dambayn keentay in Cabdixakiin Sh. Muuse oo ka tirsan saraakiisha ugu sareysa ONLF iyo dowladda Itoobiya ay gaaraan heshiis nabadeed taasi oo suura gellin doonta inuu si nabad ah u guryo noqdo sida uu dhigayo heshiisku.
Illo-wareedkan Madaxtooyadda aynu ka helnay ayaa beeniyay warar maalmahii u dambeeyay warbaahinta gudaha ku jiray oo sheegayay in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u gacan galisay Sarkaalkan ONLF ka tirsan.
ONLF ( Ogaden National Liberation Front) Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya, ayaa la aas-aasay sanadka markuu ahaa 1984, waxaana uu sheegtay mas’uuliyadda weeraro ka dhacay dhulka Soomali Galbeed.
Xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa noqday mid wanaagsan tan iyo intii Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo, 8 bishii February, ee sanadkan loo doortay xilka Madaxwaynanimada Soomaaliya.
22 bishii July, ee sanadkan waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dajiyay in ka badan 114 maxaabiis ah oo muddo fog ku xirnaa xabsiyada dalka Itoobiya, taasi oo dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ay ku tilmaameen inay muujinayso in Soomaaliya iyo Itoobiya uu u baryay Waa cusub oo dhanka xiriirka iyo darisnimada ah.
3 dii bishii May ee Sanadkan madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa booqasho Ku tagay dalka Itoobiya, isagoo kala hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in Itoobiya ay Soomaaliya ka dayso nooc walba oo faro-galin ah, taasi oo ay aqbashay xukuumadda Addis Ababa.
Previous articleAMISOM fetes Uganda police officers for distinguished role in stabilizing Somalia
Next articleSomalia says no to Saudi offer, stands by Qatar